တိုရွန်တိုရှိ Virtual Office
တတ်နိုင် Virtual ရုံး in တိုရွန်တို သင့်ရဲ့အဘို့ virtual ရုံးလိပ်စာ တိုရွန်တို၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကို virtual လိပ်စာ တိုရွန်တို၊ virtual ရုံးခန်း တိုရွန်တို၊ အွန်လိုင်းရုံး တိုရွန်တို၊ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ တိုရွန်တိုမှာ Toronto မှာ virtual office service ကိုလုပ်တယ် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး ကနေဒါမှာ။
Virtual ရုံး ကနေဒါ | Virtual ရုံးလိပ်စာ ကနေဒါ | စီးပွားရေးအတွက်စကားဝှက်လိပ်စာ ကနေဒါ | Virtual ရုံးခန်း ကနေဒါ | အွန်လိုင်း Virtual ရုံး ကနေဒါ | virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ ကနေဒါ | Virtual Workspace ကနေဒါမှာ။
Toronto တွင် virtual office လိပ်စာဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲ။
တိုရွန်တိုသည်ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မြို့သည်ခရီးသွားခြင်းနှင့်စီးပွားရေးအတွက်ရည်ရွယ်သည့်နေရာကောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်မှုနှင့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်အချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ ၂.၈ သန်းရှိသောတိုရွန်တိုသည်ကနေဒါတွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။
တိုရွန်တိုသည်ကနေဒါ၏ဂျီဒီပီ၏ ၁၁% ခန့်ကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ မြို့၏လူ ဦး ရေသည်အနာဂတ်တွင်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်မြို့တော်သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ထိပ်တန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မြို့၏လူ ဦး ရေမှာအလွန်ပညာတတ်သောကြောင့်လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ခန့်သည်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများသည်ဆေးကုသမှုကဲ့သို့အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိသည်။ တိုရွန်တိုသည်လူနေမှုဘ ၀ အတွက်သာမကစီးပွားရေးထူထောင်ရန်အတွက်လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြို့ထဲမှာရာဇ ၀ တ်မှုနှုန်းနိမ့်ကျတယ်။ တိုရွန်တိုသည်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သောကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောမြို့ဖြစ်သည်။ မြောက်အမေရိကတွင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောမြို့အဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တိုရွန်တိုသည်၎င်း၏စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသာအာရုံစိုက်သည်သာမကပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပါကာကွယ်ပေးသည်။ တိုရွန်တိုတွင်အခွန်အကျိုးခံစားခွင့်များစွာရှိပြီးအခွန်စည်းကြပ်မှုစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒီမြို့မှာနေတဲ့လူတွေဟာပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ဘ ၀ ကိုခံစားတတ်ကြတယ်။ တိုရွန်တို၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်မြို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသန့်ရှင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပြီးရေနှင့်လေအရည်အသွေးကဤအချက်ကိုသက်သေပြသည်။ ဤမြို့သည်အာရှနှင့်အမေရိကန်မြို့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူနေထိုင်ရန်သင့်တော်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြို့တော်တွင်တက္ကသိုလ်များနှင့်ကောလိပ်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လူငယ်များစွာသည်မြို့ကိုအမြဲတမ်းနုပျိုစေသည်။ ထို့အပြင်မြို့တွင်လူငယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမြင့်မားသောကြောင့်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်အလုပ်ရှာရန်လွယ်ကူသည်။ တိုရွန်တို၏အသိုင်းအဝိုင်းသည်အလွန်ဖော်ရွေသည်။ ဒေသခံအများစုသည်ပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကြသည်။ မြို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အလွန်သန့်ရှင်းပြီးရေနှင့်လေထုအရည်အသွေးကိုတိုင်းတာခြင်းသည်ဤအချက်ကိုသက်သေပြသည်။ Toronto ရှိ Virtual Office ဆိုသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပေးစာ၊ packets နှင့် package လက်ခံရရှိရန်အတွက် Toronto ရှိလိပ်စာတစ်ခုပေးသည်။ Virtual Office ၏လိပ်စာကိုစီးပွားရေးကတ်ပြားများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အခြားနေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Toronto Virtual ရုံးသည်ဖွဲ့စည်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ Virtual ရုံးသည်လည်ပတ်ရန်နေရာမရှိ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဖက်စ်တင်စရာမလိုပါ။ Virtual ရုံးသည်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ဒါကအလှည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးသည်။ Virtual ရုံးများသည်ကုမ္ပဏီ၏ပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီသည်။ Virtual ရုံးခန်းဖွင့်ခြင်းသည်သင့်တင့်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ငွေအမြောက်အများကိုစုဆောင်းပေးပြီးအရေးအကြီးဆုံးမှာသင်၏အဖိုးတန်အချိန်ဖြစ်သည်။
တိုရွန်တိုတွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်တိုရွန်တိုစီးပွားရေးရှိကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တိုရွန်တို၏ရုံးခန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းနှင့်နေရာတစ်ခုတွင်ငှားရမ်းခြင်းမပြုရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးသည်။ တိုရွန်တိုရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးတိုရွန်တိုရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ Toronto ရှိရိုးရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးထက် virtual office သည်ဈေးသက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်သင်တိုရွန်တိုရှိဂုဏ်သိက္ခာရှိသောစီးပွားရေးလိပ်စာကိုပေးဆောင်ရန်အတွက်၎င်းတိုနှင့်အတူပါလာသောကြီးမားသောငှားရမ်းခများကိုမပေးဆောင်ဘဲ Toronto ကို virtual office ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Toronto ၏ Virtual Office သည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုနည်းစေနိုင်သည်။ Virtual office space ကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့် Toronto သည် Toronto တွင် virtual office တစ်ခုအနေဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောရုံးခန်းသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲသင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်နိုင်လိမ့်မည်။ Toronto Virtual ရုံးသည်တိုရွန်တိုရှိရိုးရာစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောရုံးခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်နှင့်တိုရွန်တိုရှိငှားရမ်းခစျေးနှုန်းများမြင့်မားရန်လိုအပ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် virtual office လိပ်စာရှိသည့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ Toronto သည်သင်၏ package နှင့်စာတိုက်မေးလ်များကို Toronto ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရွေ့ပြောင်း။ ရနိုင်ပြီး Toronto ရှိ virtual ရုံးများ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါ။ တိုရွန်တိုတွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Toronto ၏ virtual office သည်သင့်အားကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
တိုရွန်တိုရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
တစ်ဦးရှိခြင်းသည် တိုရွန်တိုရှိ virtual ရုံး တိုရွန်တိုမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအရာများရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တိုရွန်တိုတို့တိုတိုတုတ်တုတ်လုပ်သော virtual office သည်လူသိများသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာတိုရွန်တိုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်စျေးကြီးသောငှားရမ်းခကိုမပေးဆောင်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ တိုရွန်တိုရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးတိုရွန်တိုရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် virtual ရုံးခန်းသည်တိုရွန်တိုရှိရိုးရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည် Toronto ရှိနာမည်ကြီးစီးပွားရေးလိပ်စာတစ်ခုအတွက်သင်ပေးဆောင်ရမည့်ကြီးမားသောငှားရမ်းခကိုမပေးဆောင်ဘဲကနေဒါမှ virtual ရုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Toronto ၏ Virtual Office သည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုနည်းစေနိုင်သည်။ Virtual office space ကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့် Toronto သည် Toronto တွင် virtual office တစ်ခုအနေဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောရုံးခန်းသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲသင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်နိုင်လိမ့်မည်။ Toronto Virtual ရုံးသည်တိုရွန်တိုရှိရိုးရာစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောရုံးခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်နှင့်တိုရွန်တိုရှိငှားရမ်းခစျေးနှုန်းများမြင့်မားရန်လိုအပ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Toronto တွင် virtual office လိပ်စာရှိခြင်းသည်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာသင်သည် Toronto ရှိသင်၏ရုံးနေရာသို့မဟုတ် Toronto ရှိ workspace တွင်ရရှိခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ရရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်၊ တိုရွန်တိုရှိ workspace သို့မဟုတ် Toronto ရှိရုံးနေရာသည်သင်၏ packets များကိုလက်ခံရရှိသည်။ တိုရွန်တိုရှိစာတိုက်မေးလ်များ၊ ဘယ်နေရာကိုမှပြောင်းရွှေ့စရာမလိုဘဲ၊ ကနေဒါအတွက်သင်၏အွန်လိုင်းရုံးနှင့်ဒါကြောင့်လူအများအပြားကတိုရွန်တိုရှိ virtual ရုံးကိုလိုအပ်သည်။ တိုရွန်တိုတွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Toronto ၏ virtual office သည်သင့်အားကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
တိုရွန်တိုရှိ Virtual Offices များသည်သင့်အားအပိုအားသာချက်များအနည်းငယ်ပေးသည်။
Toronto ရှိသင်၏ Virtual Office လိပ်စာသည်ဖောက်သည်များအားရေရှည်စွဲမှတ်စေမည့်အကျိုးရှိသည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။
သင်တိုရွန်တိုမြို့ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကိုကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲသင်၏စီးပွားရေးအခြေစိုက်စခန်းအသစ်လုပ်နိုင်သည်
သင်၏ Virtual Office ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ တိုရွန်တိုမှာ
တိုရွန်တိုရှိ Package များကိုလက်ခံရရှိပါ
တိုရွန်တိုအတွက် Cloud သိုလှောင်မှု
တိုရွန်တို Virtual Office အတွက် Package
တိုရွန်တို၌ပစ္စည်း ၂၀ ကျော်လက်ခံရရှိရန်အတွက်အခကြေးငွေမပေးပါ
တိုရွန်တိုတွင်စာအိတ် ၁၀ စောင်အတွက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်မလိုပါ
တိုရွန်တိုရှိစာတိုက်မေးလ်သိုလှောင်ခန်းကိုရက် ၂၀ အထိအခမဲ့ဖြစ်သည်
တိုရွန်တိုတွင် ၁၀ ပတ်အထိအခမဲ့ချောထုပ်သိုလှောင်ခြင်း
ကနေဒါရှိ Virtual ရုံးနေရာအတွက် Toronto ရှိ Virtual ရုံးတည်နေရာ
King Street West, Suite ၂၀၀၀၊
ဖုန်းနံပါတ်: 16479456704 +
Toronto ရှိ Virtual Office အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Virtual ရုံးအတွက်အသုံးပြုခပိုယူသည် တိုရွန်တိုမှာ
ရယူ တိုရွန်တိုရှိ virtual ရုံးအပေါငျးတို့သသာယာအဆင်ပြေမှုများ စျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာ
ကန့်သတ် ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက် virtual office အသုံးပြုမှုအကြောင်း
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုတို့အတွက်ရုံးခန်းဝန်ဆောင်မှု၊ တိုရွန်တိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးခန်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအောက်ဖော်ပြပါလူပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) ကနေဒါရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုအတွက် virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက် virtual ရုံးများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ကနေဒါမှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေ၊
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက် virtual address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကနေဒါဥပဒေအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက် virtual ရုံးလိပ်စာအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကနေဒါမှဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကနေဒါရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့ကနေဒါ၊ တိုရွန်တို၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် Workspace ဖြေရှင်းချက်အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကနေဒါ၊ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်၊ ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ရန်အသုံးပြုသည့်စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင်နျူကလီးယားပစ္စည်းများအပါအဝင်ကနေဒါနိုင်ငံကကိုင်တွယ်သည်။
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက် virtual po box ဝန်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ရေး၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုကနေဒါနိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက် virtual mailing address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ကနေဒါတွင်ဖြစ်စေ၊ ကနေဒါမှဖြစ်စေလူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုပုံစံများအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်မပေးခဲ့ပါ။
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက်ရုံးခန်းနေရာငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်ကနေဒါမှသို့မဟုတ်၎င်းမှသို့မဟုတ်သို့သွားသောဘာသာရေးအဖွဲ့များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက် virtual ရုံးများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက်အကောင်းဆုံး virtual လိပ်စာအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Pyramid အရောင်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသောကနေဒါရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့ကနေဒါသို့သွားသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုအတွက်ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်းအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်ကနေဒါရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ကနေဒါမှပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
virtual address ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အရေးကြီးသောမှတ်စု တိုရွန်တိုမှာ
virtual ရုံးမှန်ဆောင်မှုများ တိုရွန်တိုမှာ
ကျနော်တို့စျေးသက်သာ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in တိုရွန်တိုအဖြစ်ကိုလည်းသိ ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ တိုရွန်တို၊ virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု တိုရွန်တို၊ virtual ရုံးကုမ္ပဏီ တိုရွန်တို, စာပို့ဝန်ဆောင်မှု တိုရွန်တို၊ ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု တိုရွန်တို၊ ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု တိုရွန်တို၊ စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု တိုရွန်တို၊ virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် တိုရွန်တိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် တိုရွန်တို, ကို virtual po box ကိုဝန်ဆောင်မှု တိုရွန်တို, ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု တိုရွန်တို, virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု တိုရွန်တို, ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု တိုရွန်တို၊ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in ကေနဒါ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ ကနေဒါမှာ, virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ကနေဒါမှာ, ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ကနေဒါမှာ, စာပို့ဝန်ဆောင်မှု ကနေဒါမှာ, ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု ကနေဒါ၌, ငါတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် ကနေဒါမှာ, စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ကနေဒါမှာ, ကို virtual PO box ကိုဝန်ဆောင်မှု ကနေဒါမှာ, ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု ကနေဒါမှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီ ကနေဒါမှာ, virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု ကနေဒါမှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် ကနေဒါမှာ, ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု ကနေဒါမှာ။ အဖြစ် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး တိုရွန်တို၌တည်၏။
Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ ကနေဒါ | Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ တိုရွန်တိုမှာ
ပို၍ ထူးခြားသည် တိုရွန်တိုရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများ
တိုရွန်တိုဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်တိုရွန်တိုသို့သော့ချက်ဖြစ်သည်။ တိုရွန်တိုစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တိုရွန်တို၏အခွန်နှုန်းထားကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ဖြစ်သည်။ တိုရွန်တိုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ တိုရွန်တိုတွင်တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ တိုရွန်တိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ တိုရွန်တိုရှိအိမ်ခြံမြေများ၊ တိုရွန်တိုရှိထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်တိုရွန်တိုရှိ HR အတိုင်ပင်ခံများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့်တိုရွန်တိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း။
Toronto အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုလုပ်ငန်းနှင့် Toronto အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကိုစုံလင်စေရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခြင်းနှင့် Toronto အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဖက်များအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးအဖြေရှာမှုများအတွက်မိတ်ဖက်များဖြစ်သည်။
NetherLands နှင့် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ၏အထောက်အပံ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ တိုရွန်တိုရှိကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းကိုလည်းaစင်ပေါ်ကုမ္ပဏီ တိုရွန်တိုသို့မဟုတ်အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းတိုရွန်တိုတွင်တိုရွန်တို၌တည်ထောင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တိုရွန်တို၌နှစ်ပေါင်းများစွာအိုမင်းခြင်းအတွက် "စင်ပေါ်တင်ထားခြင်း" ဖြစ်သည်။ (နိုင်ငံတကာအလေ့အကျင့်) ။ စီးပွားရေးမရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိပါ။
တိုရွန်တိုမြို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သင့်သည်။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း တိုရွန်တို၌ဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြသောဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း တိုရွန်တိုမှာ ပထမ ဦး စွာ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ရရှိနိုင်မှု တိုရွန်တိုအတွက်စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည် သင်၏လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါ တိုရွန်တိုအတွက်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း တိုရွန်တိုအတွက်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ပါ!
ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် တိုရွန်တို၊ စီးပွားရေးဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း တိုရွန်တိုတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်သောအခါလုပ်ရန်အရေးကြီးဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဘဏ်အကောင့် တိုရွန်တိုတွင်သင်၏အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည် startup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုရွန်တိုတွင်စီးပွားရေးအသုံးစရိတ်များကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်တိုရွန်တိုတွင်၊ တိုရွန်တိုရှိအခွန်အကောက်များကိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်နှင့်တိုရွန်တိုရှိသင်၏ကုမ္ပဏီအောက်ရှိငွေပေးချေမှုကိုလွယ်ကူစေရန်။
Toronto မှဖောက်သည်များအတွက်၊ သင်ရှာနေလျှင် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုရွန်တိုမှတိုးတက်မှုနှုန်း ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် တိုရွန်တိုအပြင်ဘက်မှာ၊ မင်းရဲ့အဖြေ၊ တိုရွန်တိုအပြင်ဘက်မှာတောင်ပံတွေကိုဖြန့်ဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ တိုရွန်တိုမှာရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုမင်းကိုပေးနိုင်ပါတယ် သင်၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကိုစတင်ပါ တိုရွန်တိုမှ။
ဖွင့်လှစ် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် တိုရွန်တိုမှ
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ပါ တိုရွန်တိုနှင့်ရှာကြသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်၎င်းကိုဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် တိုရွန်တိုမှ။ Toronto ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၊ တိုရွန်တိုရှိအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သင်တိုရွန်တိုမှမည်သည့်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစီစဉ်နေသည်မဟုတ်ကြောင်းပြသရန် Toronto တွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်သည်အကောင့် တိုရွန်တိုအတွက် ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာ တိုရွန်တိုအတွက်
eCommerce ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် တိုရွန်တိုအတွက် All-In-One ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်း တိုရွန်တိုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေပေးချေမှုဝင်ပေါက် နှင့် ကုန်သည်အကောင့် တိုရွန်တို၌စတင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။ တိုရွန်တိုအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ တိုရွန်တိုအတွက်ငွေပေးချေသည့်စနစ်နှင့်ကုန်သည်အကောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ် တိုရွန်တို၌ - သင်တစ် ဦး လျှင် eCommerce ကုန်သည် တိုရွန်တိုမှာ
ကျော်ဘို့တိုရွန်တိုအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် 170 နိုင်ငံများ
တိုရွန်တိုရှိကုန်သည်အကောင့် - ငွေကြေး ၂၀၀ လက်ခံပါ
ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါ ထက်ပိုမိုထံမှတိုရွန်တိုအတွက် 300 ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကိုဝယ်ပါ တိုရွန်တိုအတွက် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်ပါ Toronto.To ၌တည်၏ စီးပွားရေးစတင်ပါ တိုရွန်တိုတွင်လက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ယူခြင်းကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
စီးပွားရေးရောင်းအား တိုရွန်တိုတွင်လူတစ် ဦး သည်တိုရွန်တိုရှိကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ၊
သငျ့လျြောသော ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ တိုရွန်တိုမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရောင်းချခင်လုပ်ရ ဦး မှာပါ။ ပါတီများက ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုသတိပြုရမည် စီးပွားရေးရောင်းချခြင်း တိုရွန်တိုနှင့်၎င်း၏နောက်ကွယ်မှဥပဒေရေးရာသက်ရောက်မှု၌တည်၏။
အကောင့်များ Outsourcing တိုရွန်တိုမှာ
အကောင့်များ outsourcing ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်တိုရွန်တိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည်။ Toronto တွင်ပေးထားသောအကောင့်များ outsourcing ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင့်အားမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချရန် Toronto ရှိဘဏ္inာရေးညွန်းကိန်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
- စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှု တိုရွန်တိုမှာ
တိုရွန်တိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုရွန်တိုတွင်တည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်၊ တိုရွန်တိုမှအီးယူအတွက်ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင်ရယူခြင်းသို့မဟုတ်တိုရွန်တိုမှဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်ကမ်းလွန်လိုင်စင်၊ Crypto လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ICO လိုင်စင်သို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်နိုင်ငံအသီးသီးရှိတိုရွန်တိုမှလောင်းကစားလုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်လိုအပ်လျှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်း။
Virtual Number (VoIP) တိုရွန်တိုအတွက်
VoIP ကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများ ဘို့ နှစ်ခုလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုရွန်တိုနှင့်လူနေအိမ် VoIP ၌တည်၏။
Virtual နံပါတ် တိုရွန်တိုအတွက် 89 နိုင်ငံများ | 290 အမြို့မြို့
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိုရွန်တိုတွင်ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ၊ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကောင်း တိုရွန်တိုသို့မဟုတ်အခြားဘယ်နေရာမှာမဆို၊ သင်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှိနေခြင်းပျောက်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ HR ကိုတိုရွန်တို၌အမှုဆောင်ရှာဖွေပါ တိုရွန်တိုအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများ, အခွက်တဆယ်ဝယ်ယူမှု တိုရွန်တို၊ စုဆောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို outsourcing တိုရွန်တိုရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်တိုရွန်တိုအတွက်အလုပ်ခွင်ကိုအခမဲ့အသုံးပြုပါ
တိုရွန်တိုရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအတိုင်ပင်ခံ (HR) ပေါင်းအခမဲ့ယောဘသည် Portal ကို တိုရွန်တိုအတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်
Talent Acquisition တိုရွန်တိုမှာ
Talent Acquisition သည်အဆင့်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သောတိုရွန်တိုရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘက်စုံဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်။
- စုဆောင်းသည် တိုရွန်တို၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ရွေးချယ်ပါ တိုရွန်တို၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ဘော်ဒါတွင် တိုရွန်တို၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် Talent Acquisition သင်တိုရွန်တိုရှိရာထူးများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းထက်များစွာသာလွန်လိမ့်မည်။ သို့သော်တိုရွန်တိုရှိသင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များပြည့်မီစေရန်မည်သူကူညီနိုင်သည်ကိုတိုရွန်တိုနှင့်နိုင်ငံတကာမှဖြစ်စေ Toronto နှင့်ဗျူဟာအရဆွဲဆောင်ရန်အရင်းအမြစ်ရှာဖွေရန်။
စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် Outsourcing တိုရွန်တိုမှာ (RPO)
ကျနော်တို့ပေး စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုပြင်ပ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စေရန် Toronto ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူပါ။
RPO ပံ့ပိုးပေး Toronto ရှိ Recruiting Process Outsourcing ပံ့ပိုးသူသည်လူသိများသော Toronto တွင်သင့်ကုမ္ပဏီ၏တိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည် HR တိုရွန်တိုအတွက်ဘက်စုံငှားရမ်းဖြေရှင်းချက်ပေး။ Toronto ရှိ RPO ပံ့ပိုးသူသည်တိုရွန်တိုရှိလိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းများ၊ သင်၏စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တိုရွန်တို၌သင်တို့၏အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်နည်းစနစ်များကိုပေးနိုင်သည်။
(ဒီတစ်ခုအဘို့ဖြစ်၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ တိုရွန်တိုအတွက်အမှန်ပင်ရှာဖွေသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ တိုရွန်တိုရှိ)
အကယ်၍ သင်သည် Toronto ရှိအလုပ်ရာထူးကိုရှာနေသူ၊ Toronto ရှိအတွေ့အကြုံရှိအလုပ်များ၊ Toronto ရှိအလုပ်များ၊ Toronto ရှိ IT အလုပ်များ၊ တိုရွန်တိုတွင်ရှိသောအလုပ်အကိုင်များ၊ တိုရွန်တိုလုံခြုံရေးအလုပ်များ၊ တိုရွန်တိုရှိရောင်းအားအလုပ်များ၊ တိုရွန်တို၊ တိုရွန်တိုရှိရာသီအလိုက်အလုပ်သမားအလုပ်များ၊ တိုရွန်တိုမြို့ရှိအလုပ်အကိုင်များ၊ တိုရွန်တိုရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၊ တိုရွန်တိုဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအလုပ်များ၊
ကျွန်ုပ်တို့တွင်တိုရွန်တို၌အလုပ်ရှာဖွေသည့်နေရာများရှိသည်။ ၎င်းသည် Toronto နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာ ၁၀၆ ခုတွင်အလုပ်ရှာဖွေရန်ကူညီသူဖြစ်သည်
HR အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သည်တိုရွန်တိုတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သောအခါ Toronto ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောလိုအပ်ချက်များကို တွေ့ဆုံ၍ များစွာကူညီနိုင်သည်။
လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် အတိုင်ပင်ခံ တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့၊
- Toronto အတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်တိုင်ပင်ခြင်း
- ၁၀၅ နိုင်ငံနှင့်တိုရွန်တို - နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ။
အကောင်းဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ HR အလေ့အကျင့် တိုရွန်တိုအတွက်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အတူအတွေ့အကြုံကို စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြား တိုရွန်တို၌တည်၏။
ထုတ်လုပ်သူသန်းသန်းပေးသည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး Toronto ရှိစီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးရန်ကတိကဝတ်ဖြင့်အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး Toronto တွင်အကြံပေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး တိုရွန်တိုနှင့်နိုင်ငံတကာမှဒါရိုက်တာမှ“ C” suite level သို့တိုရွန်တိုအတွက်။ သင်၏လျှို့ဝှက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုတိုရွန်တိုရှာဖွေရေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Toronto အတွက်အတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။
တကယ်ပါပဲအကယ်၍ သင်သည်တိုရွန်တိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့လျှင်အောင်မြင်မှုနှင့်ကြီးထွားမှုအတွက်တိုရွန်တို၌လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုရွန်တိုရှိအလုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအခမဲ့ပေးသည်။
- Toronto ရှိကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာပါ
- Toronto တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအခမဲ့တင်ပါ
တိုရွန်တိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ HR Consulting service မှတဆင့် ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားနိုင်သည်။ သို့မှသာသင် Toronto ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
တိုရွန်တိုတွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးရှာဖွေခြင်း၊ တိုရွန်တိုတွင်အကြံပေးခြင်း၊ တိုရွန်တိုရှိပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး၊ တိုရွန်တိုရှိဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုလိုင်စင်စသည်တို့ကိုလှည့်ပါ။
အကယ်၍ အကူအညီလိုလျှင် Toronto တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုရွန်တိုရှိထူထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ရှိပြီးဖြစ်သည် ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင် တိုရွန်တိုကနေ အီးယူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်လိုင်စင် ဘို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် တိုရွန်တိုမှ, Crypto ဖလှယ်ခွင့်လိုင်စင် နှင့် ICO သို့မဟုတ် လောင်းကစားလိုင်စင် အမျိုးမျိုးသောတရားစီရင်မှုအတွက်တိုရွန်တိုကနေ။
- လုပ်ငန်းလိုင်စင် တိုရွန်တိုမှ
- ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင် တိုရွန်တိုမှ
- ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် တိုရွန်တိုမှ
- Crypto Exchange လိုင်စင် တိုရွန်တိုမှ
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် တိုရွန်တိုမှ
- လောင်းကစားလိုင်စင် တိုရွန်တိုမှ
- ငွေပေးချေမှုကြားခံ တိုရွန်တိုမှလိုင်စင်
တိုရွန်တို၌အလုပ်လုပ်မြို့တော် = တိုရွန်တိုမြို့ရှိလက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ - တိုရွန်တိုမြို့ရှိလက်ရှိတာ ၀ န်များ
ဘို့ လည်ပတ်ငွေကြေး တိုရွန်တိုအတွက်ငွေကြေး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူ တိုရွန်တိုအတွက်လုံ့လဝီရိယမပါဘဲ, ကြွေးရှင်များ, တိုရွန်တိုအတွက်အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့်တိုရွန်တိုရဲ့စျေးကွက်နှုန်းအတိုင်းထိုစီးပွားရေး၏ဝယ်ယူစျေးနှုန်းအပေါ်မပါဘဲလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲတိုရွန်တိုအတွက်; အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ဘို့ တိုရွန်တိုရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ Toronto ရှိ Diligence နှင့်ဆက်စပ်သောသင်လုပ်နိုင်သည်။
ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး Toronto ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အတွက်တိုရွန်တိုရှိပစ္စည်းအသစ်များအတွက် ၁၀၀% ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသည်
တိုရွန်တိုရှိပစ္စည်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက် - ပိုသိကြ ဆက်သွယ်ရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလှည့်ကျအတိုင်ပင်ခံ တိုရွန်တိုအတွက်အမြတ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေခြင်းငှါတိုရွန်တိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များပြောင်းလဲရန်ကူညီသည် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ငွေသားစီးဆင်းမှု။ စသည်တို့ Toronto ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ န်ဆောင်မှုများလှည့် စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်တိုရွန်တိုအတွက်။
တိုရွန်တိုမှဖောက်သည်များအားအိုင်တီဝန်ဆောင်မှုများပေးခဲ့သည်။ web development တိုရွန်တို၊ eCommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုရွန်တို၊ blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ တိုရွန်တို၊ software development တိုရွန်တို၊ မိုဘိုင်း app ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Toronto မှာလည်းလူသိများ မိုဘိုင်း application ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုရွန်တို၊ ဝဘ်ဒီဇိုင်း တိုရွန်တို၌, တိုရွန်တိုအတွက်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့ပေး: တိုရွန်တိုရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊ တိုရွန်တိုမြို့ရှိဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊
တိုရွန်တိုရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော Web Designing Company
တိုရွန်တိုရှိဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ Toronto ရှိ Client`s အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပေးသည်မှာ Corporate, Responsive နှင့် SEO Optimized ဖြစ်သည်
တိုရွန်တိုအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသော Web Development
တိုရွန်တိုမြို့ရှိ Web Development Company နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်အသွေး၏။
တိုရွန်တိုအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသော App Development
351+ ကျော်သောအက်ပ်များ နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်။ Toronto ရှိ App Development ကုမ္ပဏီ.
တိုရွန်တိုရှိသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်များ - သင်၏အွန်လိုင်းတိုးတက်မှုနှင့်တိုရွန်တိုနှင့်နိုင်ငံတကာတွင် ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်အတွက်။
တိုရွန်တိုအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသော Software Development
တိုရွန်တိုရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီ ဖွံ့ဖြိုးမှု, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် devOps များအတွက်တိုင်ပင်။
တိုရွန်တိုအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသော Block Chain Development
စိတ်ကြိုက် တိုရွန်တိုရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသင့်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း။
တိုရွန်တိုရှိအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနှင့်တိုရွန်တိုရှိအခမဲ့အိမ်ခြံမြေ ၀ န်ဆောင်မှု
Toronto တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိုရွန်တိုတွင်တိုးချဲ့ခြင်း၊ သင်သည်တိုရွန်တိုရှိရုံးခန်းသို့မဟုတ်အိမ်တစ်လုံးလိုအပ်သည်။ Toronto အိမ်ခြံမြေလိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ပေါ်တယ်။ တိုရွန်တိုရှိအိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များနှင့်တိုရွန်တိုရှိအိမ်ခြံမြေပွဲစားများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
တိုရွန်တိုရှိအိမ်ခြံမြေတစ်ခုကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်း။ ငါတို့ကြိုးစားကြည့်ပါ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် တိုရွန်တိုမှာ တိုရွန်တိုရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်း
တိုရွန်တိုရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားချင်ပါသည်။ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် တိုရွန်တိုမှာ တိုရွန်တိုတွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
တိုရွန်တိုရှိစိုက်ပျိုးရေးမြေများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ထပ်မံ၍ မရှာဖွေပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုရွန်တို၏အခမဲ့အိမ်ခြံမြေစာရင်းများကိုသုံးပါ။
Toronto သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သို့သော်သင် Toronto တွင်သင်လိုချင်တာကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုရွန်တိုအတွက်သုံးရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သမျှ၊ သင်လိုချင်တာ!
တိုရွန်တိုရှိ Classified Services
တိုရွန်တိုအဘို့အ Portal ကို
တိုရွန်တိုတွင်လုပ်ငန်းစတင်ရန်သို့မဟုတ်တိုရွန်တိုတွင်သင်၏လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ပါ၊ သင်တိုရွန်တို၌ရုံးခန်းပရိဘောဂများ၊ တိုရွန်တိုရှိလက်ပ်တော့များ၊ တိုရွန်တိုရှိသင်၏တိုက်ခန်းအတွက်ပရိဘောဂများလိုအပ်နိုင်သည်၊ တိုရွန်တိုတွင်သေးငယ်သောအရာများစွာရှိပါသည်၊ နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 105 ။
တိုရွန်တိုအတွက်အခမဲ့ Classified Services
တိုရွန်တိုရှိအိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများကိုတိုရွန်တိုကော်ဖီ၊ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် Owen ကဲ့သို့ရှာဖွေပါ။
Toronto ရှိ Lot More …
တရားဝင်အတွက် Toronto ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေကိုဆက်သွယ်ပါ ကနေဒါနေထိုင်မှု .
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Toronto ရှိ Virtual Office
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်များအတွက် Virtual Office Address Toronto တွင်စာတိုက်နှင့်ပို့စာများကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့သင်လုပ်နိုင်သည် - သင်၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့် Virtual ရုံးတိုရွန်တိုအကောင့်ရှိ Post-box settings တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးနာမည်နှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မှသာစာနှစ်စောင်စလုံးကို Virtual Office Address ရှိအမည်များအောက်တွင်ရနိုင်သည်။ တိုရွန်တို။
Virtual ရုံး Toronto | virtual ရုံးကနေဒါ
Toronto Virtual Office Address သည်ကမ်းလွန်စာတိုက်ပုံးတစ်ခုလား။
ဖော်ပြခဲ့သောတည်နေရာအတွက်တိုရွန်တိုရှိ Virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုများသည်တိုရွန်တိုရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့မှစီမံခန့်ခွဲထားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာဖြစ်ပြီးတိုရွန်တိုရှိရုံးခန်းနေရာတည်နေရာရှိသင်၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထုပ်များကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်း။
တိုရွန်တိုရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ ကနေဒါ၌ Virtual ရုံးလိပ်စာ
တိုရွန်တိုရှိ virtual office လိပ်စာများကိုလက်ခံရရှိသည့်စာတိုက်နှင့်စာတိုက်ပုံးများကိုလိပ်စာများစွာဆီပို့လို့ရသလား။
တိုရွန်တိုရှိ Virtual Address ကို ကနေဒါ၌ Virtual လိပ်စာ
ကျွန်ုပ်တို့တိုရွန်တို Virtual ရုံးလိပ်စာသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၏စာပို့လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်၏စာသို့မဟုတ်အထုပ်ဖြစ်စေ Toronto ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာသို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းခြင်းနှင့်တိုရွန်တိုအတွက် virtual mailbox မှတစ်ဆင့်သင့်အားအသိပေးခြင်းခံရပြီးနောက်သင်ရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုဖွင့်ရန်၊ စကင်လုပ်ရန်၊ ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်လွှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်။
တိုရွန်တိုရှိ Virtual Business Address | ကနေဒါ၌ Virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ
တိုရွန်တိုရှိ Virtual Business လိပ်စာသည်ကနေဒါတွင်ရှိနေလိုသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုသွားရန်ကောင်းသည်။ သင်၏တည်ရှိမှုအတွက်တိုရွန်တိုရှိသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေအမြောက်အများရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုဘဲသင်၏တိုရွန်တိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ရန်သင့်ဆန္ဒအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တိုရွန်တိုရှိ Virtual ရုံးခန်း ကနေဒါ၌ Virtual ရုံးခန်း
တိုရွန်တိုမှ virtual PO box အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အပိုဆောင်းနှင့်အပိုကုန်ကျစရိတ်များသို့မဟုတ်တိုရွန်တိုရှိ virtual mail လိပ်စာသို့မဟုတ်တိုရွန်တိုရှိ virtual ရုံးလုပ်ငန်းခွင်များအတွက်အပိုကုန်ကျစရိတ်များ?
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာသောမူဝါဒနှင့်ကနေဒါတွင် virtual mailing address သို့မဟုတ်ကနေဒါမှ virtual PO box သို့မဟုတ်ကနေဒါရှိ virtual office works တို့ကိုဖော်ပြသောကြောင့်၎င်းအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာကနေဒါရှိ virtual office ဟုခေါ်သည့်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများရှိသည်။ စံအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောအပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုမရွေးချယ်မီအခြေအနေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြဲတမ်းအသိပေးပါ။
တိုရွန်တိုအတွက် Virtual Office Workspace | တိုရွန်တိုအတွက် virtual mail လိပ်စာ တိုရွန်တိုအတွက် Virtual PO box
ကနေဒါမှ virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခြားအမည်များကဘာတွေလဲ။
ကနေဒါရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူတို့နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအမည်များမှာကနေဒါရှိ virtual ရုံးများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများ၊ ကနေဒါရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကနေဒါရှိ digital workspace solution များ၊ ကနေဒါရှိရုံးခွဲရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကနေဒါမှ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကနေဒါမှ virtual လိပ်စာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကနေဒါမှ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ကနေဒါရှိဒီဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တိုရွန်တိုရှိ virtual ရုံးကုမ္ပဏီ၊ ကနေဒါရှိ virtual mailbox ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကနေဒါရှိငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ တိုရွန်တိုရှိမေးလ်ပို့ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကနေဒါမှစာတိုက်ပုံးပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကနေဒါမှ virtual စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု၊ ကနေဒါ၌ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ တိုရွန်တိုရှိစာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု။
Toronto ၏ virtual ရုံးနှင့်အခြားနိုင်ငံများကိုမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ကနေဒါအပါအ ၀ င်နိုင်ငံတိုင်းသည်တိုရွန်တိုသို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ် virtual office ကိုအသုံးပြုရန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ရှင်းလင်းချက်များအတွက်ထိတွေ့ရယူပါ။
တိုရွန်တိုရှိ Virtual စာတိုက်လိပ်စာ တိုရွန်တိုရှိ Virtual ရုံးစာတိုက်လိပ်စာ တိုရွန်တိုတွင်စာပို့ခြင်း တိုရွန်တိုရှိရုံးမှတ်ပုံတင်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ တိုရွန်တိုအတွက်
တိုရွန်တိုရှိ Startup များအတွက်အထူးပံ့ပိုးမှု
အကယ်၍ သင်ကတိုရွန်တိုမှာ startup ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Toronto ရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့်နိုင်ငံတကာမှအထူးအထောက်အပံ့များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
တိုရွန်တိုရှိ One Stop Shop
Toronto ရှိ Client Acquisition Support
ကျွန်ုပ်သည် millionmakers.com နှင့် Toronto Business သတင်းအတွက်စာရင်းပေးသင့်ပါသလား။
ဘို့ နောက်ဆုံးပေါ်တိုရွန်တိုစီးပွားရေးသတင်း စီးပွားရေးဥပဒေများ Toronto, Toronto ကိုစတင်ရန် စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်းတိုရွန်တို, နောက်ဆုံးပေါ်တိုရွန်တိုစီးပွားရေးသတင်း တိုရွန်တို၊ တိုရွန်တို၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန် စီးပွားရေးဥပဒေတိုရွန်တို စီးပွားရေးဥပဒေများ, စီးပွားရေးဥပဒေ တိုရွန်တို, စီးပွားရေးဥပဒေများ တိုရွန်တို, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ တိုရွန်တို, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ်များ တိုရွန်တို, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူး တိုရွန်တို၊ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သစ်တိုရွန်တို၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ, တိုရွန်တို နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ, နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ တိုရွန်တို, တိုရွန်တိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေသစ်များ နောက်ဆုံးသတင်းများ, တိုရွန်တို၏နောက်ဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များ, တိုရွန်တို၏နောက်ဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ, နောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများတိုရွန်တို, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ် Torontoအသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်း တိုရွန်တို, တိုရွန်တိုစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ် Toronto, စီးပွားရေးဆောင်းပါးတိုရွန်တို, တိုရွန်တို စီးပွားရေးဆောင်းပါးတိုယိုတာ စတင်တည်ထောင်သည် တိုရွန်တို, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သစ် တိုရွန်တို၊ တိုရွန်တို စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်း တိုရွန်တို, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်းပါးများ တိုရွန်တို၊ တိုရွန်တိုစီးပွားရေးဆောင်းပါးများ၊ တိုရွန်တိုစီးပွားရေးသတင်းများ၊ တိုရွန်တို စီးပွားရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Toronto ကို update, တိုရွန်တို စတင်တည်ထောင်သည်, တိုရွန်တိုသတင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်, တိုရွန်တိုသတင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်, တိုရွန်တိုသတင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုစတင်ရန်မည်သို့မည်ပုံ၊ စတင်ရန်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေး တိုရွန်တို update အတွက်, စီးပွားရေးအစီအစဉ် တိုရွန်တိုသတင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း Toronto အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း Toronto မွမ်းမံမှုများ, အသေးစားစီးပွားရေး တိုရွန်တို၊ တိုရွန်တိုအသေးစားစီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးသတင်း တိုရွန်တို, စီးပွားရေးဝဘ်ဆိုက် တိုရွန်တို, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုရွန်တို၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုရွန်တို၊ တိုရွန်တိုစီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုရွန်တို၊ တိုရွန်တိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။